Internet Explorer Inofungisisa kushandiswa kwayo Martech Zone
Internet Explorer Inofungisisa mashandisiro ayo
China, Gumiguru 4, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
IE7 ine masimba akasimba, asi ini zvakare ndakanyora kuti sei ndichifunga kuti iri kurasikirwa nemugove wemusika uye zvinoshungurudza mushandisi wepakati kuti ashandise… kunyanya iyo menyu system iyo inotarisa kuruboshwe kuruboshwe uye kurudyi kurudyi rwekushandisa.
Ndakanyora nezve IE7 uye zvinotyisa kushandiswa kanopfuura mwedzi wapfuura. Inoita se IE timu yakafungazve zano ravo neiri kuuya yekuchengetedza kuburitswa kweIE7. Iyo bhaa yemenu ikozvino ichaoneswa nekutadza.
Usati wafunga kuti ndiri kuzvibhabhadzira kumusana, unofanira kuziva kuti ini am ndinofara kuti IE yakabuda mumiganhu yakajairwa uye ikaedza mushandisi mutsva paradigm Dambudziko rangu nderekuti handina chokwadi chekuti vakamboyedza paradigm iyo vasati vaiburitsa.
Ini ndinofunga chingave chinoshamisa zano rekuti timu iunze ribhoni interface uye iyo 'Hofisi Bhatani' mashandiro ayo ari, IMHO, inhanho inoshamisa yekumberi mukushandisika muHofisi 2007. Kwete chete zvaizovandudza mashandisirwo ebhurawuza, yaizoisiyanisa kubva kumakwikwi, kuunza vanhu kune iribhoni interface - pamwe kuwana kumwe kugamuchirwa, uye kwaizounza chigadzirwa cheMicrosoft. zvimwe zvinoenderana nevamwe vese vemhuri.
Ehe, ini ndichiri kutenda kuti bhurawuza ndiani achatsika kukwikwidza kutanga ichave iyo browser rinounza rakanyanya 'kunze kwebhokisi' mushandisi interface zvikamu. Pasina chero chinodikanwa chekurodha pasi, dai ndaigona kuronga mu datagrid, HTML mupepeti, chinhu chekarenda, kumonyororwa kwemifananidzo… neyakajairwa tsika xhtml ma tag uye masitayera, ini ndaizogadzira kunyorera kweye browser pamberi peumwe!
Tags: Facebook KushambadziraGoogle+ yeDummiesHollis ThomasesJesse GaraTangaSocial Media Examiner
Zvakanaka Kurega Kutaurisa Kwakashata